Mbipụta 3D - Akụrụngwa efu | Ngwaọrụ akụrụngwa (Peeji nke 2)
Edemede banyere oru ndi kacha ewu ewu nke ejiri Lego mebe ya na ihe ngwanrọ eji eme ihe, oru ndi ruru otutu otutu ma di mfe ime ...
Ole na ole ebi akwụkwọ 3D arụpụtara na Spen dị ka Tresdpro R1, onye na-ebi akwụkwọ ọkachamara na-enye nnukwu ọrụ na atụmatụ yana nha nke yiri nbipute desktọọpụ, agbanyeghị ihe enwere ike ime na Tresdpro R1 bụ ...
Porsche ga-eji teknụzụ obibi 3D mee akụkụ maka ụgbọ ala ya
Porsche, mgbe ọ gụsịrị ọtụtụ ule dị mma, ka kwuputara na nkewa Porsche Classic ga-eji teknụzụ mbipụta 3D dị iche iche rụpụta akụkụ nke iji weghachite ụdị ọhụụ nke akara German.
Keratin, ezigbo protein maka iji na 3D ebi akwụkwọ
O doro anya ma ọ bụrụ na ị bụ onye nwere ahụ ike ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-amasị egwuregwu na ị na-emekarị ya mgbe niile, ...
Ngalaba Teknụzụ bụ ụlọ ọrụ ọkachamara na imepụta ụlọ site na mbipụta 3D nke jisiri ike ịmepụta ọgbọ ọhụrụ nke ogidi na ọkara mgbidi nwere njirimara na-adọrọ mmasị.
Stratasys, Dassault Systèmes na Easton Lachappelle na-agwa anyị maka Echi na-akparaghị ókè, ebumnuche na-achọ ịzụlite na imepụta ọhụụ ọhụụ nke 3D e biri ebi nke na-adọrọ mmasị karị site na isi ọrụ yana nke na-adọrọ mmasị na ekele ha nwere ike ịhazi ha.
United Kingdom na-etinye nde euro 25 na etiti maka mmepe nke teknụzụ ọhụụ ọhụrụ
United Kingdom, site na National Institute for Health Research, ka emepeela ụlọ ọrụ ọhụrụ maka nyocha nke teknụzụ ọhụụ ọhụrụ ebe etinyere ihe na-erughị nde euro 25.
PP na-achọ ịkwalite mbipụta 3D nke prostheses site na itinye ndị injinia na ndị ọrụ ahụike ugbu a
Rybanye ebe anyị ga-ekwu maka nkwupụta iwu na-enweghị iwu nke PP gosipụtara na Congress of Deputies iji kwalite akụrụngwa ahụike na ọnụnọ nke ndị injinia ruru eru na mbipụta 3D.
HP na-agwa anyị gbasara ụdị igwe obibi akwụkwọ 3D dị ọhụrụ nwere ike ibi akwụkwọ na agba zuru ezu. Anyị na-ekwu maka Jet Fusion 300 na Jet Fusion 500.
Howon Lee, onye na-eme nchọpụta a ma ama, na-agwa anyị banyere ọrụ nke ndị otu ya rụrụ na nke ha jisiri ike chepụta echiche 4D ọhụrụ.
Petronor na-adabere na mbipụta 3D iji rụpụta akụkụ ahụ maka nfuli mmiri ya
Site na mmemme nke achọrọ njikọ nke ụlọ ọrụ mpaghara nwere nnukwu mba dị iche iche, Petronor jisiri ike mee ka Addimen rụpụta akụkụ maka nfuli mmiri ha site na mbipụta 3D.
EPFL na-arụ ọrụ ugbu a na mmepe nke mbipụta endoscopic 3D
Otu ndị nyocha sitere na École Polytechnique Fédérale de Lausanne jisiri ike mee usoro dị mkpa na mmepe na nyocha nke ihe a maara dị ka mbipụta 3D endoscopic.
Apple nwere ike wepụta ngwa obibi 3D nke afọ a 2018
Rybanye ebe anyị ga-ekwu maka patents ọhụrụ nke Apple ka debara aha ya, 44 patenti ebe anyị hụrụ otu metụtara na Apple nwere ike ịmepụta agba ya 3D ihe nbipute.
HP ruru nkwekọrịta mmekorita ya na CEA nke ga-erite uru obibi akwụkwọ 3D
HP ka kwuputara nkwekọrịta nkwekọrịta ọhụrụ na CEA iji mee ihe ọzọ na-aga n'ihu n'ọchịchọ ya iji nye ndị ahịa ya niile teknụzụ dị mma nke ibi akwụkwọ 3D ụlọ ọrụ.
Na China ha doro anya na anyị niile ga-ebi uwe nke anyị n'ụlọ
Na China ọ dị ka ha na-apụtawanye ìhè na teknụzụ dịka mbipụta 3D nọ ebe a. Otu ihe akaebe bụ na ha nwere olile anya na ogologo oge na onye ọ bụla na-eji uwe nke aka ya n'ụlọ.
Navantia nzọ na 3D mbipụta maka ụgbọ mmiri
Navantia ka tọhapụrụ ndị nta akụkọ na-ekwupụta nsonye nke teknụzụ obibi 3D na usoro nrụpụta yana imepụta ụgbọ mmiri n'ime ụgbọ mmiri nke ụlọ ọrụ na Puerto Real, Cádiz.
Ihe omuma ihe omuma nke ihe omuma ohuru iji meputa ihe ndi ozo
Ngwaọrụ Desktọpụ ka gosipụtara teknụzụ ọhụụ nke onye ọrụ ọ bụla nwere ike iji mepụta akụkụ ọla dị mgbagwoju anya site na mbipụta 3D, na-ewepụ nkwado niile dị mkpa ma jiri aka ha mechara.
Utah kwadoro SWAT ya na ndị na-ebi akwụkwọ 3D
Ọbụna tupu ịmalite ịkọwa nkọwa na akụkọ a, m ga-achọ ịkwụsịtụ iji ghọta ihe ...
N'ihi 3D ebi akwụkwọ, ebe nchekwa nke mgbanwe ibe e-amụbawo budata
Ọ bụ ezie na ha anaghị adịkarị na nnukwu ahịa, eziokwu bụ na ha bụ ...
Kwambio Ceramo One, seramiiki 3D na-ebi akwụkwọ
Companylọ ọrụ America Kwambio na-agwa anyị banyere nnukwu ngosi ya kachasị ọhụrụ, Ceramo One, seramiiki 3D na-ebi akwụkwọ maka ọrụ ọkachamara nke ụlọ ọrụ ahụ kwere nkwa iji belata ọnụahịa mmepụta.
Nexa3D na-egosi ngwa ngwa ngwa nbipute 3D ngwa ngwa
Rybanye ebe anyị ga-ekwu maka Nexa3D, ụlọ ọrụ nke gosipụtarala ngwa obibi akwụkwọ ụdị SLA ọhụrụ ọhaneze, ihe nlele nke ha mebere ngwa ngwa 'ọsọ ọsọ'.
Bugatti ga-amalite n'ichepụta breeki calipers maka ugbo ala ya site na iji mbipụta 3D
Bugatti ka kwuputara na ndị injinia ya ewepụtala usoro na teknụzụ dị mkpa iji bido ịmepụta titanium breeki calipers maka supercars iji mbipụta 3D.
Ngwa akụrụngwa emere site na obibi 3D ekele maka nkwekọrịta ọhụụ n'etiti Incase na Carbon3D
Incase ka batara nkwekọrịta na Carbon3D site na nke ọ na-erite uru site na iji teknụzụ mbipụta 3D, ihe ga-enye ya ohere imepụta ngwa mkpanaka yana nke mara mma ma sie ike karị, ọkachasị n'okwu ikpe.
Olli, uzo eji eji Motors Mpaghara ji ego nde kwuru nde
Mpaghara Motors bụ ụlọ ọrụ dị na United States nke mere isi okwu site na ịnweta nnabata nde kwuru nde iji gaa n'ihu na-azụlite Olli, ụgbọ ala kwụrụ ọtọ nke mbipụta 3D rụpụtara.
Starbucks tụgharịrị na mbipụta 3D iji chọọ ụlọ ahịa kọfị Shanghai ọhụrụ mma
Starbucks na-eju anyị anya na oghere nke ụlọ oriri na ọ newụ newụ ọhụrụ na Shanghai, mpaghara nke ihe karịrị 2.500 square mita na ndị ọrụ 400 ga-eju gị anya maka iji ezigbo teknụzụ na-adọrọ mmasị na-ewu ya dị ka mbipụta 3D ma ọ bụ ojiji nke mmụba. eziokwu.
Carbon na-anata $ 200 iji wetara teknụzụ ya nye ndị na-emepụta ihe
Carbon ka kwuputara mmechi nke usoro ego ọhụrụ nke ha nwere olile anya na ha ga-aga n'ihu na-emepe emepe teknụzụ ha na-atọ ụtọ maka mmepụta akpụkpọ ụkwụ site na mbipụta 3D, nke n'oge ahụ mere Adidas ji dị egwu na nke ha ji nweta 200 nde dollar ugbu a.
ArcelorMittal ga-achọta ebe obibi ígwè obibi 3D ọhụrụ ya na Avilés
O doro anya na ọtụtụ mba ArcelorMittal enweghi nnukwu nsogbu ịchọta ebe dị mma maka ebe ọhụụ ya ...
The PLA 3D850 na 3D870 si Spanish emeputa Sakata3D nwere ike na-enweta a crystallization usoro iji ot ot oven nke anyị ji budata melite n'ibu e ji mara ihe.
Logigram, onodu-a na-nkà turntable mere 3D ebi akwụkwọ
Ọtụtụ bụ ụlọ ọrụ imepụta nke na-ahụ na mbipụta 3D na teknụzụ nke nwere ike inyere ha aka na ọtụtụ ...
Mpempe akwụkwọ Omni3D 3D dị ugbu a na Spain n'ihi INTECH3D
N'ime ahịa obibi akwụkwọ 3D enwere ọtụtụ ụdị nke, n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, anyị enweghị ike inweta ...
General Electric rụpụta mbụ 3D e biri ebi turboprop engine
General Electric na-arụ ọrụ na nhazi nke engine turboprop nke ga-ezukọta akụkụ ndị ekepụtara site na iji teknụzụ mbipụta 3D dị iche iche.
General Electric na-achịkwa ihe karịrị 90% nke òkè nke Arcam
Otu afọ mgbe General Electric na-achịkwa ọdịnihu nke Arcam, ike ya na ụlọ ọrụ ahụ toro na izu ndị na-adịbeghị anya ruo 95% nke òkè ya.
X-Plorer, a chernobyl mere si 965 3D e biri ebi akụkụ
Otu ìgwè nke ụmụ akwụkwọ injinịa jisiri ike rụpụta igwe nrụrụ, e mere baptism dịka X-Plorer, nke mejupụtara akụkụ 965 nke obibi 3D mere.
Ekele maka ColorFABB ọhụrụ na Lehvoss filament ihe okike gị agaghị ata ahụhụ
ColorFABB na Lehvoss, nnukwu ụlọ ọrụ abụọ dị na Europe metụtara mbipụta 3D, gosipụtara filament ọhụrụ ha nwere ike ibelata nsogbu ịda mba.
Carbon 3D na-anata $ 200 nde iji melite usoro nrụpụta akpụkpọ ụkwụ ya
Carbon 3D ka nwetara ego nke 200 nde dollar iji melite usoro mmepụta nke akpụkpọ ụkwụ egwuregwu Adidas.
Na Germany ha emeela marzipan na mbipụta 3D
Niederegger, otu n’ime ụlọ ọrụ amaara ama n’ichepụta marzipan, malitere iji igwe na-ebi akwụkwọ 3D na imepụta ya.
4D mbipụta, esote nnukwu mgbanwe na mgbakwunye n'ichepụta
Ọtụtụ bụ ndị na-eme nchọpụta na ọbụna ụlọ ọrụ ndị ghọtara nnukwu uru na obibi akwụkwọ nwere ike ịnye ...
Ọdụm 2, ndị ọhụrụ amaghị na 3D-ebi akwụkwọ si LEON3D
LEON3D na-ekwuwapụta ọbịbịa na ahịa nke ọdụm ọhụrụ 2, onye nbipute 3D nke nwere mmasị na teknụzụ pụrụ iche nke naanị Leroy Merlin ga-ere.
Green Ship ka kwupụtara mkpebi ya iji kwadebe ụgbọ mmiri ya na ndị na-ebi akwụkwọ 3D ka ha nwee ike ịmepụta akụkụ na ụgbọ mmiri n'onwe ya.
Grégoire Pfenning bụ onye mmebe na onye mepụtara ihe a na-akpọ nnukwu ụlọ Rubik nke mmadụ kere.
GE mmako na-egosi anyị ụdị ọhụụ dị elu nke ngwa nbipute 3D
GE mmako ka weputara nsonaazụ nke oru ya, ọ nweghị ihe na-erughị 3D ngwa nbipute nwere ike ịgbanwe ụwa nke nrụpụta mgbakwunye.
Airbus na Arconic ga-arụkọ ọrụ ọnụ na mmepe nke mbipụta 3D maka mpaghara aerospace
Airbus na Arconic ka kwuchara na ha ekwenyela na ha ga-arụ ọrụ na mmepe nke igwe 3D nke ụgbọelu.
Ndị PP chọrọ ịnye ụlọ ọgwụ niile ụlọ ọrụ 3D nke ha
Ndị PP na-atụ aro na Congress of Deputies ịmepụta iwu ka ụlọ ọgwụ niile dị na Spain nwee ngalaba obibi akwụkwọ 3D nke ha.
FabRx na-anwa imepụta ọgwụ ndị e biri ebi maka ụmụaka
E nwere ọtụtụ teknụzụ anyị maara taa nke ụlọ ọrụ dị iche iche na-amalite inye ohere nke ịmepụta ...
Concept Laser na-amalite iwu ụlọ akwụkwọ 3D ya
Mgbe ogologo echere ụlọ ọrụ German Concept Laser mechara malite iwu 3D Campus ọhụrụ mara mma.
BioMimics, ntinye ohuru nke Stratasys na ngalaba ogwu
BioMimics bụ ikpo okwu maka ụdị ahụike nke Stratasys kere site na nke ha nwere ike ịzụ, rụọ ịwa ahụ ... ụdị ndị ọrụ ahụike niile.
Daimler malitere imepụta akụkụ ụgbọala site na ibi akwụkwọ 3D
Daimler, dị ka ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ metụtara ụwa nke ụgbọ njem, dị ka Renault, ka ...
RIC na-emepụta nkewa ọhụrụ ewepụtara maka mbipụta 3D
Reprografía Industrial de Cataluña, RIC, ekwuputala ọkwa nke ọhụụ ọhụrụ n'etiti ụlọ ọrụ ewepụtara maka mbipụta 3D.
MIT na-ewepụta teknụzụ nke na-eme ka ihe ntanetị 3D gị ugboro 10 ngwa ngwa
MIT ka bipụtara akwụkwọ na-akọwa teknụzụ ọhụụ nwere ike ịbawanye ọsọ 10D ngwa ngwa site na 3.
Anyị ga-enyocha Smartfil BOUN, GLACE, PLA 3D850 na EP filaments na anyị ga-akọwa n'uju nkọwa niile banyere ojiji ha.
CPWC bụ teknụzụ ọhụụ nke ụlọ ọrụ Ukraine Spry Build mepụtara nke ejiri ya iji melite ọsọ nke ndị na-ebi akwụkwọ 3D ụdị DLP.
Nnwale nke Virginia Tech na-eme ka o kwe omume 3D ibipụta Kapton
Otu ìgwè ndị nyocha sitere na Virginia Tech jisiri ike mepụta usoro ọrụ iji bipụta 3D ihe dị ka Kapton.
Hoversurf Formula, ụgbọ ala kwụ ọtọ nke arụpụtara site na mbipụta 3D
Ọtụtụ bụ ụlọ ọrụ ha na-ahụ na ụwa ụgbọ ala na ọdịnihu ya dị mkpirikpi, nke yiri ka ọ bụ ...
LLNL na-eme ka ígwè e biri ebi ruo ugboro atọ siri ike karịa nchara ọdịnala
Ndị nchọpụta na Lawrence Livermore National Laboratory enweela ihe ịga nke ọma n'ịmepụta ígwè siri ike na nke ductile siri ike karị.
Sicnova ga-ebido ndị na-ebi akwụkwọ maka XYZprinting
Grupo Sicnova ka bipụtara akwụkwọ akụkọ pịa nke na-ekwu maka nkwekọrịta mmekọrịta nke emere na XYZprinting iji mepụta ndị na-ebi akwụkwọ 3D.
Nwere mmasị na mbipụta 3D? Usoro nkuzi Autodesk ndị a n'efu nwere ike inyere gị aka
LinkedIn na-ekwuputa mwepụta nke usoro 90 nke nkuzi Autodesk bụ n'efu na-eche maka mbipụta 3D.
Tinyere mbipụta 3D n'ime atụmatụ dijitalụ nke Gọọmentị Spain tụrụ aro
Gọọmentị nke Spain ka kwupụtara ọkwa dijitalụ ọhụrụ iji melite ma melite netwọọdụ azụmaahịa Spanish.
Sabic gosipụtara filament ọhụrụ maka ibi akwụkwọ 3D
Chemicallọ ọrụ kemịkalụ ama ama bụ Sabic amalitela filament ọhụrụ maka mbipụta 3D nke pụtara maka njirimara ụlọ ọrụ ya.
3D ebipụta mmeri n'etiti ndị na-eto eto na India
Ihe obibi 3D na-ewu ewu nke ukwuu n'etiti ndị na-eto eto nọ n'India, ruo n'ókè nke na ụmụ akwụkwọ na-eke ndị na-ebi akwụkwọ nke aka ha 3D ...
General Electric mmako na-achịkwa GeonX
General Electric Additive, onye enyemaka nke otu nnukwu mba dị iche iche General Electric, ka kwuputara nzụta onye na-emepụta sọftụwia onye Belgium bụ GeonX.
Endesa Foundation ji 40D ibi akwụkwọ akwadebe ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ 3 na Madrid
Fundación Endesa emeela ka ọ bụrụ gọọmentị na ebe agụmakwụkwọ 40 dị na Madrid ga-enweta ndị obibi akwụkwọ 3D iji kụziere ụmụ akwụkwọ ha ihe.
Otu ìgwè ndị injinia jisiri ike ịmepụta ngwa ngwa nke nwere ike ịbawanye ọsọ ọsọ nke ngwa nbipute 3D gị na-enweghị ogo mbipụta.
HP Jet Fusion 3D 4210, ụdị ihe ntanetị 3D ọhụrụ batara n'ahịa ahụ
Banye ebe anyị ga-ekwu maka HP Jet Fusion 3D 4210 ọhụrụ, igwe nke rutere n'ahịa agbadoro maka iji ndị ọkachamara.
MOOZ, onye nbipute 3D nwere ikike ịkpụ na igbutu osisi
MOOZ bụ ọrụ na-achọ ego site na Kickstarter, ebe ekpebiri ya iji mepụta ngwa nbipute 3D nke nwere ike ịkpụ na ịkpụ osisi.
PLA CARBON nke FFFWORD bụ filament fiber carbon. Pasent nke eriri eriri carbon abanyela n'ime usoro nrụpụta
Plumen na-ewetara ya katalọgụ nke 3D e biri ebi oriọna
Companylọ ọrụ Bekee Plumen dị na akụkọ ahụ maka ngosipụta nke oriọna ọhụrụ ya arụpụtara site na iji teknụzụ mbipụta 3D.
Ndị ọkà mmụta sayensị Australia jikwaa ịmepụta usoro ọhụrụ maka obibi akwụkwọ 3D
Otu n'ime isi ihe dị mkpa nke ka dị ugbu a na mbipụta 3D bụ kpọmkwem na nke a ...
Kinazo e1, 3D igwe eletriki igwe eletrik
Site na mmekorita nke Kinazo na Volkswagen Group, taa anyị nwere ike ikwu maka e-igwe kwụ otu ebe dị ka nke e1.
Porsche zụtara akụkụ nke Markforged ịkekọrịta
Na enweghị nkwupụta ọrụ sitere n'aka Markforged, Porsche ka batara na nketa nke onye ọrụ ụlọ ọrụ North America.
Renault na-achịkwa iji belata ịdị arọ nke injin ya site na mbipụta 3D
Renault weputara nkwupụta mgbasa ozi na-ekwupụta uru dị na iji sistemụ ígwè 3D nke ígwè ya na-arụ ọrụ injin.
O kwere omume ugbu a ịmepụta 3D corneas e biri ebi site na akpịrịkpa azụ
Otu ìgwè ndị nchọpụta si Mahadum Massey na-ekwu na ha nwere ike ịme corneas site na mbipụta 3D site na akpịrịkpa nke azụ Hoki.
Air Liquide na-emepụta 3D e biri ebi chernobyl maka hydrogen n'ichepụta
Air Liquide na-eju anyị anya site na ngosipụta nke onye na-arụ ọrụ kpọmkwem maka mmepụta nke hydrogen nke arụpụtara kpamkpam site na mbipụta 3D.
Ekele maka bọọdụ Arduino a, a na-echegharịla akwara niile nọ n'ụbụrụ ikpuru
Otu ndị ọkà mmụta sayensị, n'ihi ojiji nke bọọdụ Arduino, ejirila i toomi ọrụ nke ụbụrụ ikpuru.
Cubibot, ihe ntanetị 3D nke FDM nwere ike ịbụ nke gị na erughị euro 250
Cubibot bụ ngwa nbipute 3D nke ụdị FDM nke ị nwere ike iji na gburugburu ebe obibi ọ bụla nwere ike ịbụ nke gị maka $ 299 gbakwunye na mbufe.
Tumaker nwere ihe ruru ego 40.000 iji wulite ihe obibi akwụkwọ ọhụrụ 3D ya
Rybanye ebe anyị ga-ekwu maka nnabata dị ukwuu nke ụdị ngwa nbipute 3D ọhụrụ dịka Tumaker Voladd nwere n'ahịa.
FitStation, HP ọhụrụ n'elu ikpo okwu chepụta omenala akpụkpọ ụkwụ
HP na-eweta FitStation, usoro ikpo okwu zuru oke nke iji mepụta akpụkpọ ụkwụ site na mbipụta 3D ahaziri nke ọma maka onye ọrụ ọ bụla.
Inye ihe zụtara ACTech maka euro 36,6
Otu n'ime ngalaba metụtara mbipụta 3D nke na-eto eto na ọnwa ndị na-adịbeghị anya bụ, na-enweghị ebe ...
Stratasys PolyJet Agilus30, ihe yiri roba nke ukwuu
Stratasys PolyJet Agilus30, ihe eji enyere gi aka imeputa ihe obula nwere ihe yiri roba.
Renishaw RenAM 500Q, onye nbipute ọhụrụ 3D nke mejupụtara laser anọ
Renishaw RenAM 500Q, ihe nbipute 3D ọhụrụ laser nke ị nwere ike ịba ụba arụpụtaghị gị site na iji isi anọ.
XYZPrinting na-agwa anyi gbasara ihe nbipute 3D ohuru ha
Fernando Hernández, onye isi oche nke XYZPrinting ugbu a, ekwuputala na ụlọ ọrụ ahụ adịla njikere ịmalite ihe nbipute ọhụrụ 3D.
Printabrick, ihe ngwọta maka mpempe Lego furu efu
Printabrick bụ ebe nchekwa nke akụkụ Lego na ngwa iwu anyị nwere ike ibudata ma bipụta na 3D ebi anyị maka ọrụ n'efu ma ọ bụ dị ka ihe egwuregwu
A ga-arụpụta igwe obibi akwụkwọ 3D kachasị ukwuu na Europe na Vigo
FabLab nke Vigo ga-ahụ maka ịhazi oru ngo nke na-achọ iwulite igwe obibi akwụkwọ 3D kachasị ukwuu na Europe.
3D obibi ga-abụ ihe kpatara ọnwụ nke 25% nke ahia ụwa
Ihe obibi 3D nwere ike ịbụ ihe kpatara mgbanwe kachasị agbanwe na azụmaahịa ụwa nwere ike ị ga-enweta n'ime iri afọ ndị na-adịbeghị anya.
NASA iji 3D ebipụta igwe igwe
NASA ka kwuputara okike uzo ohuru nke eji aru oru na 3D ebi ihe na ihe abuo di iche.
Akerlọ nyocha Makerbot, nhọrọ ohuru maka ndị mmepe na mmasi banyere ibi akwụkwọ 3D
Mlọ ọrụ Makerbot na-aga n'ihu ịkụ nzọ na agụmakwụkwọ na nyocha, ugbu a, o mepụtala Makerbot Labs, saịtị ebe onye nrụpụta nwere ike nyocha ...
Meadow nke oge a bụ ụlọ ọrụ America nke merela akụkọ maka ekele nke akpụkpọ anụ ọhụrụ ya nke 3D bioprinting mepụtara.
Nyocha XYZprinting Da Vinci 3D Pen, pen iji see na 3D
Anyị na-akọwa etu mkpịsị akwụkwọ 3D si arụ ọrụ ma anyị ga-enyocha n'ụzọ zuru ezu XYZprinting Da Vinci 3D Pen iji bipụta ọnụ ọgụgụ 3D. Ọ bara uru?
Cazza Construction gosipụtara anyị robot nwere ike iwughachi ụlọ
Teknụzụ dị ka ihe ọhụrụ dị ka mbipụta 3D yiri ka ọ na-eji nwayọọ nwayọọ enweta ala ekele ...
Imprimo na-ewetara ngwa nbipute ọhụrụ 3D buru ibu
Imprimo ka gosipụtara nnukwu akwụkwọ ntanetị 3D ọhụụ ọhụrụ, nke pụtara iche maka njirimara ya na ọnụ ahịa ya.
Nke a bụ ihe ihe mbipụta ọhụụ Natual Robotics 3D dị ka ya
Natual Robotics laghachiri na oge a iji gosipụta ọhaneze ihe ọ bụla na-erughị otu n'ime ndị na-ebi akwụkwọ ...
Adidas ga - amalite n'ichepụta usoro nke akpụkpọ ụkwụ ya nwere oke site na ibi 3D
Adidas ka mere ọkwa maka mwepụta nke ụdị akpụkpọ ụkwụ basketball nke a ga-arụ site na mbipụta 3D.
Apis Cor na-anata nde euro 6 iji gaa n'ihu iwu ụlọ maka ibi akwụkwọ 3D
Apis Cor bụ ụlọ ọrụ dị adị mgbe emepụtara onye nbipute 3D nwere ike imepụta ụlọ zuru ezu naanị n'ime awa 24.
Zute Kappa, onye mbupute 3D nke izizi nwere usoro kwụ ọtọ
Kappa bụ ihe ngosi 3D ọhụụ ọhụrụ nke a ka na-achọ ego site na weebụsaịtị Kickstarter a maara nke ọma iji ruo ahịa.
Airbus na-etinye, maka oge mbụ, akụkụ nke nrụpụta 3D rụpụtara na ụgbọ elu azụmahịa
Airbus ka kwuputara na ha jisiri ike ịzụlite teknụzụ dị mkpa iji mepụta akụkụ ọla site na mbipụta 3D maka ụgbọ elu ha.
3DLAC gosipụtara anyị vaporizer ọhụrụ ya maka ndozi obibi akwụkwọ 3D
3DLAC na-ekwupụta mwepụta nke ihe ịgba agba ọhụrụ maka idozi mbipụta 3D, ngwaahịa nke, n'adịghị ka nke gara aga, bụ ihe omumu ugbu a.
BCN3D na-ewetara onye nbipute 3D ọhụrụ ya
BCN3D alaghachila na oge a ka ọ ga-eju anyị anya site na ngosipụta nke ihe nbipute ọhụrụ 3D na-atọ ụtọ, ihe atụ akpọrọ Sigmax.
Prusa megharia i3 ya na teknụzụ kachasị mma dị na ahịa
Mgbe ogologo oge gachara, ụlọ ọrụ Prusa mechara kwupụta mwepụta nke ụdị ọhụrụ nke i3 a ma ama.
Ultimaker ka kwuputara na, na mgbakwunye na mmepe nke ndị na-ebi akwụkwọ 3D ọhụrụ, ụlọ ọrụ ahụ ga-amalite ịkwalite ngwanrọ 3D mbipụta akwụkwọ ya.
Mụta ịrụ ọrụ na mbipụta 3D n'ụzọ dị mfe ekele DIBUPRINT 3D
Mụta imepụta ihe ma rụọ ọrụ na mbipụta 3D na-asọpụta ekele maka ngwanrọ dị mfe ma kensinammuo dị ka DIBUPRINT 3D.
Emepụtara ihe ọkpụkpụ a site na brik 2.000 3D e biri ebi
Ntinye ebe anyị ga-ekwu maka ihe osise na-adọrọ mmasị nke otu ndị injinia sitere na brik 3D ebipụtara mere na Hong Kong.
Ndị ọkà mmụta sayensị mepụtara sistemụ ebumpụta ụwa nke 3D
Otu ìgwè ndị nyocha si Mahadum Monash dị na Melbourne enweela ihe ịga nke ọma n'ịmepụta usoro 3D nke a na-ebipụta rọketi
NanoDimension ka gosipụtara ọhụrụ onye obibi akwụkwọ 3D ọhụụ, ihe atụ emere aha ya bụ DragonFly 2020 Pro.
Ricoh ga-emepụta ebe obibi akwụkwọ 3D ọhụrụ na Catalonia
Ricoh Spain ka kwuputara na ụlọ ọrụ ahụ na-ezube itinye ego na-erughị otu nde euro na ...
Site na Mahadum Rey Juan Carlos nke Madrid anyị na-enweta ozi gbasara ihe okike nke 3D iji mepụta akụkụ curved.
Josef Prusa egosila ụdị ihe eji eme 3D A na-akpọ onye nbipute ọhụrụ a Prusa i3 MK3, ụdị ọhụụ nwere akwa magnetik na-ekpo ọkụ ...
Hod Lipson, onye ọkà mmụta sayensị na Columbia Engineering, na ndị otu ya enweela ike ịmepụta ọhụụ ọhụụ nke ígwè e biri ebi maka robot.
CATEC ga-abụ onye izizi na Andalusia izipu mpempe akwụkwọ gaa na mbara igwe
CATEC n'ikpeazụ na mgbe ọtụtụ ule gachara ma ọkachasị mgbe ị gafere ọtụtụ njikwa njikwa, ga-eziga mpempe akwụkwọ ebipụtara na ohere.
Stratasys ga-azụ ma kwado ụmụ akwụkwọ VET na Basque Country na mbipụta 3D
Stratasys abanyela nkwekọrịta nkwekọrịta na Basque Country iji zụọ ma kwado ụmụ akwụkwọ ya na usoro ọzụzụ ọzụzụ ọrụ.
Mimaki weputara ihe nbipute 3D nke nde 10 ya
Ntinye ebe anyị ga-ekwu maka Mimaki 3D na-ebi akwụkwọ, igwe nwere ike ịrụ ọrụ ruo ihe ruru nde 10.
Atọm 3, onye nbipute 3D nwere ike ịrụ ọrụ na SLA na FDM
Layer Otu, mgbe obere oge funahụrụ, na-alaghachi na akụkọ ahụ mgbe e gosipụtara ọhụrụ Atọm 3, igwe mgbagharị mgbanwe 3D.
Siemens NX AM, ọrụ nkwonkwo nke Siemens na HP
Silọ ọrụ Siemens ekwuputala nsonaazụ nke mmekorita ọhụrụ na HP mba dị iche iche, ọrụ kpatara Siemens NX AM
Refabricator bụ ka NASA chọrọ isi gbanwee plastik ka ọ bụrụ ihe maka oghere
Refabricator bụ usoro ohuru nke NASA kere iji mezuo na enwere ike ịgbanwe ihe plastik ka ọ bụrụ ihe obibi 3D.
Thales enweelarị ebe eji ebi akwụkwọ ọhụụ 3D na Casablanca
Mgbe ọtụtụ ọnwa raara nye iwu nke ihe owuwu ahụ, Thales meghere ọnụ ụzọ nke World Center ọhụrụ ya na Casablanca.
Nke a bụ foto izizi nke ụgbọ okpuru mmiri US nke 3D nke ndị agha mmiri nke mba ahụ bipụtara na XNUMXD
Rybanye ebe anyị ga-ekwu maka ezigbo nsonaazụ nke United States Navy rụzuru mgbe ị na-ewu akụkụ ụgbọ okpuru mmiri site na mbipụta 3D.
BiliScreen, ngwa nke eji 3D ebiputa iji choputa kansa cancer
BiliScreen bụ sọftụwia mepụtara Ubiquitous Computing Lab na n’enyemaka nke drawer biri ebi nwere ike ịchọpụta ọrịa kansa pancreatic.
Sony na-etinye nyocha 3D ozugbo na Xperia XZ1 ọhụrụ gị
Sony gosipụtara ngwa mkpanaka ọhụrụ ya maka Xperia XZ1 na Xperia XZ1 Compact site na nke ị nwere ike ịnụ ụtọ nyocha 3D zuru ezu.
Thyssenkrupp mepee ebe ohuru a raara nye mbipụta 3D
Thyssenkrupp bụ ụlọ ọrụ German a ma ama nwere njikọ chiri anya na mpaghara nchara. Mgbe ọnwa ole na ole gachara ụdị ...
Tumaker Voladd, onye nbipute 3D ejikọrọ na nnukwu ikpo okwu dị n'ịntanetị
Tumaker ka gosipụtara na ha ga - emecha nwee ihe dịka puku 3.000 nke ngwa nbipụta Voladd 3D maka naanị oge ekeresimesi.
Sculpto +, ọgbọ na-esote 3D na-ebi akwụkwọ?
Sculpto + bụ igwe ntanetị 3D na-enweghị eriri nke na-anakọta ọrụ nke ga-abụ ọgbọ na-abịa n'ihu nke ụlọ obibi 3D obibi, mana ọ ga-eme ka o kwenye?
E nyere PEAK Sport ịmepụta akpụkpọ ụkwụ basketball ndị a site na mbipụta 3D
PEAK Sport bụ ụlọ ọrụ dị na China taa na-eju anyị anya na ngosi nke akpụkpọ ụkwụ basketball nke mbipụta 3D mere.
Voxeljet na-agwa anyị gbasara teknụzụ obibi 3D ọhụụ
Banye ebe anyị ga-ekwu maka ọrụ teknụzụ 3D ọhụụ nke ndị injinia Voxeljet ka mepụtara.
Na Spain ọ ga-abụ iwu ịmepụtara akpụkpọ anụ site na mbipụta 3D site na njedebe nke 2017
Otu ndị ọkachamara kwupụtara na ha na-atụ anya ka Spanishlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọgwụ na Ahụike Spanish na-ekwe ka mbipụta akpụkpọ na njedebe nke 2017.
Nzọụkwụ dị nso na nghọta ka esi arụ ọrụ Kapton na mbipụta 3D
Ọrụ kachasị ọhụrụ nke ọtụtụ ndị nyocha na Mahadum Virginia Tech na-enyere anyị aka ịghọta otu esi arụ ọrụ na Kapton na mbipụta 3D.
3D bipụta usoro dum nke Volkswagen Caddy a
Otu conglomerate nke ụlọ ọrụ German arụ ọrụ iji gosipụta na ọ ga-ekwe omume imepụta chassis Volkswagen Caddy na usoro obibi 3D.
Toybox, ihe eji ebi 3D maka umuaka ulo
Ọ bụrụ na ị na-achọ ụlọ obibi 3D maka ụlọ gị, igwe na mgbakwunye na ịnwale teknụzụ a na-enye gị ohere igosi ha ya ...
Refabricator, 3D na-ebi akwụkwọ ga-azọpụta NASA ọtụtụ puku dollar
Refabricator bụ ngwa nbipute 3D nke na-etinyegharị ihe eji eme ihe ma enwere ike iji ya na mbara igwe ebe ọ naghị emepụta ájá iji mepụta filaments ...
HP na Deloitte kwupụtara ọkwa mmekorita 3D mbipụta akwụkwọ ọhụụ
Companieslọ ọrụ mba abụọ dị ka HP na Deloitte ka kwupụtara na ha erutela nkwekọrịta nkwekọrịta ọhụrụ metụtara mbipụta 3D.
Nke a bụ otu ụlọ agha ọhụrụ edoziri ahazi nke US Army
N’ịgbalị iwebata 3D mbipụta akwụkwọ na ọrụ ha, ndị agha United States na-egosi anyị ogige ọhụrụ 3D ebipụtara.
XYZprinting na - ewetara Vinci Agba ya ohuru
Mgbe oge ụfọdụ adịghị arụ ọrụ, XYZprinting laghachiri n'ibu ya na onye nbipute ọhụrụ 3D e mere baptizim dị ka Vinci Color.
Ha na-ekepụta nnukwute 3D nyocha maka ọtụtụ bọọdụ PiCam na ọtụtụ Pi Zero, usoro dị ọnụ ala ma dịkwa ọnụ ala maka nnukwu nyocha a ...
BASF ka kwupụtara zụta Innofil3D, onye Dutch na-emepụta filaments maka mbipụta 3D nwere ọtụtụ amụma mba ụwa.
Adidas na-eweta mbipụta 3D na usoro mmepụta ya
Mgbe ọtụtụ ọnwa nwalere mbipụta 3D, Adidas ga-eweta ya na usoro mmepụta akpụkpọ ụkwụ ya.
Dassault Systèmes ịmalite inye ngwanrọ na-achọ
Dassault Systèmes ka tọhapụrụ ndị mgbasa ozi na-ekwupụta na ha ga-amalite ịnye ndị ọzọ software na-achọ.
Nke a bụ ihe Danit Pelleg ọhụrụ 3D nchịkọta uwe e biri ebi dị ka
Danit Pelleg, onye na-ese uwe na-esite na Israel, ka juru anyị anya na mkpokọta uwe ọhụrụ ya nke mbipụta 3D mere.
Nzuko omebe iwu nke United States kwadoro iji akwụkwọ 3D agha
Agbanyeghi na eji ya, ndị omebe iwu United States mechara nye iwu iji nye ikike iji mbipụta 3D agha.
Ndị na-eme nchọpụta mepụtara ụzọ ọhụụ iji gbochie mbibi 3D na-ebi akwụkwọ
Otu ìgwè nke ndị nyocha si Mahadum Rutgers-New Brunswick ewepụtala ụzọ iji gbochie gị ibipute onye obibi akwụkwọ 3D gị.
North Korea bidoro iji 3D ebipụta ngwa agha
Ndị injinia North Korea na ndị nrụpụta nwere ike ịrụ ọrụ na ịme ngwa ọgụ site na iji teknụzụ obibi 3D.
Na Malaga, a na-eji splin ebipụta ebipụta karịa plasta
Na Malaga, ejirila splin e biri ebi iji dochie ihe nkedo na mgbaji. Ọganihu nke na-eme ka ndụ ndị ọrịa dịkwuo mma ...
Markforged na-enye ndị na-ebi akwụkwọ ọhụụ 3D ọhụụ
Markforged ka malitere ulo oru ohuru ohuru ebe o gosiputara akparamagwa ohuru nke X3 na X5 ohuru, uzo abuo adiro ugbua
Gwuo Nintendo Gbanye gị na otu aka ekele maka nkwụnye ọkụ a
Ekele maka ihe nkwụnye plastik a nke arụpụtara site na mbipụta 3D, ị nwere ike ịkpọ naanị Nintendo Switch gị naanị otu aka.
Cocoon, oche okomoko 3D nke Louis Voitton biri
Cocoon bụ aha nke ụlọ ọrụ okomoko na ụlọ ọrụ ejiji Louis Voitton mere baptizim ọhụrụ oche ya nke obibi 3D mere.
Aka a robotic nwere ike ịtụgharị asụsụ gaa n'asụsụ ogbi
Mahadum Antwerp dị na Belgium ka enyere ọrụ ka ha mepụta rọbọt nwere ike ịtụgharị asụsụ asụsụ ndị ogbi.
Russia malitere ịnata akara site na satịlaịtị 3D edepụtara
Ka ọtụtụ oge gasịchara, Spacelọ Ọrụ Ọdụ Russianlọ Ọrụ nke Russia mechara kwenye na 3D satịlaịtị ebipụtara na-arụ ọrụ nke ọma.
Ortho Baltic na-egosi anyị nnukwu ọgwụ implants
Ortho Baltic bụ ụlọ ọrụ Lithuania nke na-eme akụkọ maka ịdị elu na nnabata nke ngwa ọrụ ahụike e biri ebi.
Nke a bụ otu ọhụụ iko ndị arụpụtara site na 3D mbipụta si OXYDO
OXYDO, a ma ama Italian eyewear ika, ka juru anyị anya na nchịkọta ọhụrụ ya, usoro nke ụdị…
Emebere na Space enweworị ike ịmepụta akụkụ site na mbipụta 3D n'ime ebe yiri oghere
Mere Na Space bụ ụlọ ọrụ California nke jisiri ike imepụta akụkụ site na mbipụta 3D na gburugburu ebe nwere njirimara yiri nke oghere
Miam Factory, ụlọ ọrụ na-eme ka chocolate site 3D ebi akwụkwọ na-ezite ya n'ụlọ gị
Miam Factory bụ otu n'ime ụlọ ọrụ mbụ nwere ọkachamara pụrụ iche na imepụta akụkụ chocolate site na mbipụta 3D.
O kwere omume ugbu a imepụta 3D corneas e biri ebi
Site na Biomedical Research Institute nke Lalọ Ọgwụ La Paz anyị na-enweta nyocha nke ejiri nwee ike mepụta corneas site na mbipụta 3D.
Anyị na-enyocha FormFutura filaments: StoneFil, HDGlass na EasyFil PLA
FormFutura filaments: StoneFill juputara na mpempe akwụkwọ nke na-achọ i imitateomi nkume, HDGlass filament translucent, na EasyFill PLA Black
Levi gosipụtara nchịkọta mbụ nke jaketị nke obibi 3D
Levi kwupụtara na ntinye nke teknụzụ ederede akwa 3D n'ime usoro mmepụta ya, maka ugbu a maka jaket denim ya
Site na teknụzụ blockchain, ndị na-ebi akwụkwọ 3D nwere ike ịnwe nchebe karịa
Site na ojiji nke teknụzụ blockcheni, ndị na-ebi akwụkwọ 3D anyị nwere ike ịchekwa data gị na ịlụ ọgụ.
EHLA, uzo ohuru eji aru oru na igwe 3D
Companylọ ọrụ Trumpf ka kwupụtara EHLA, ụzọ ọhụrụ iji nweta mkpuchi igwe nke akụkụ nke mbipụta 3D mere.
Poietis na-achọ itinye ego nke 2 nde euro maka Wiseed
Ngalaba nkwukọrịta nke ụlọ ọrụ France Poietis ka kwupụtara ọhụụ nke mkpọsa ọhụrụ na Wiseed iji nweta ego.
Filament maka mbipụta 3D site na ntụ olili
Narbon bụ ụlọ ọrụ Spanish nke nwere ọkachamara na ịmepụta filament maka ibi akwụkwọ 3D site na ntụ olili ozu.
Ọ bụ gọọmentị, Prodways Group zụtara AvenAo Industries
Ruo oge ụfọdụ, Prodways Group gosipụtara ọtụtụ asịrị n'ikpeazụ maka ịzụta AvenAo Industries.
Nchoputa anya, 3D ebipụta sistemu na - enyocha oria anya
Kavya Kopparapu, jiri ama ama, ihe nbipute 3D na AI iji mepee Anya Anya, sistemu nchọpụta anya dị ọnụ ala ma dịkwa mfe.
Ministri na-ahụ maka nchekwa na-enye onye obibi akwụkwọ 3D ntọala ya na Segovia
Ministri na-ahụ maka nchekwa ka kwuputara ọbịbịa nke mbipụta 3D na isi ya na Segovia ka ọ ghara ịtụ ịtụ akụkụ si United States.
Mercedes-Benz malitere imepụta akụkụ maka ugbo ala ya site na mbipụta 3D
Mercedes-Benz Trucks, nkewa gwongworo nke ụlọ ọrụ ama ama ama ama ama ama ama ke Germany, rụpụtara akụkụ 3D izizi ya maka gwongworo.
Loom bụ aha nke ụlọ ọrụ Cosine Additive mere baptizim ọhụrụ ya na-agbanwe na akwa akwa eji 3D ebi akwụkwọ.
Ekele maka onye mmebe Danit Peleg ị nwere ike iyi jaket 3D e biri ebi
Danit Peleg, onye na-emepụta ejiji, ekwenyela na ọ ga-eresị 100 nkeji nke jaket ọhụrụ ya nke obibi 3D mere.
Match.com 3D-na-ebipụta ndị ị ga-achọ ịlụ na mgbasa ozi ha kachasị ọhụrụ, ụlọ elu mmapụta nke ga-egosipụta 3D akara ngosi pere mpe nke mmadụ asaa.
3D ebi akwụkwọ na-eme ka o kwe omume iji ejiji anyị mbadamba osisi na mbụ na onye ikpe na-enye a dị iche iche anya ka Ras Pi.
Badger, a robot ike igwu ala tunnels na 3D obibi conduits
Badger bụ oru ngo nke Mahadum Glasgow na Carlos III University nke Madrid mepụtara iji gwuo tunnels na ibipụta okporo ụzọ.
FLYPI, Open Source microscope dabere na Rasperry Pi maka € 100
FlyPi na - etinye 3D akụkụ ndị e biri ebi, Raspberry Pi microcomputer, yana ọtụtụ elektrọnik dị ọnụ ala, dịka LEDs na kamera web.
Cell3Ditor, oru ngo n’acho imeputa sel mmanu site na ibi 3D
Cell3Ditor bụ oru ngo nke Energy Research Institute nke Catalonia kwalitere nke na-achọ ịmepụta mkpụrụ ndụ mmanụ site na mbipụta 3D.
Usoro ohuru a gha enyere gi aka ime nyocha 3D n'okpuru mmiri
Enwere ọtụtụ ndị nyocha gburugburu ụwa ndị na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na usoro ọhụụ na ohere ndị metụtara teknụzụ ...
N'ihi teknụzụ 3D ndị a, e mepụtara Arrinera Hussarya ọhụrụ
Arrinera Hussarya bụ ezigbo ihe atụ nke ọrụ ebe, iji nweta agility na ọsọ, anyị ejirila teknụzụ mbipụta 3D dị iche iche rụọ ọrụ.
Obsidian, onye nbipute 3D nke nwere ike ịbụ nke gị maka dollar 99
Rybanye ebe anyị ga-ekwu maka Obsidian, ihe ntanetị 3D ọhụrụ nke Kodama kere nke na-achọ inweta ego site na Kickstarter ma nwee ike ịbụ nke gị maka $ 99
Burger King na-ekwupụta Mmemme Mmemme Ọhụrụ 3D
Burger King, na mmekorita ya na Atomic Lab, ka malitere mmemme nke na-achọ iweta mbipụta 3D nye ndị kachasị mkpa.
Nsogbu DJI Spark, ụfọdụ nkeji si na mbara igwe daa
Usersfọdụ ndị ọrụ na-amalite ịkọ ụfọdụ chinchi dị na DJI Spark ha, ụfọdụ nkeji na-ada site na mbara igwe na-enweghị ịdọ aka ná ntị.
Nke a bụ akwa mbụ emere site na obibi 3D na China
Ntinye ebe anyị ga-ekwu maka njirimara nke akwa mmiri mbụ ejiri teknụzụ obibi 3D arụpụtara na China.
Usoro nyocha ọhụrụ nke 3D na-etinye ụkpụrụ Archimedes n'ọrụ
Otu ndị ọkà mmụta sayensị ejirila ụkpụrụ nnupụisi mmiri Archimedean oge ochie iji mepụta usoro nyocha 3D ọhụụ.
Desktop Metal na-enweta ego isi ego dị nde $ 115
Companylọ ọrụ Desktop Metal dị ugbu a wepụtara nkwupụta mgbasa ozi na-ekwupụta na ha anatala ego nke nde dollar 115.
Iji faịlụ egosiri ị nwere ike iji 3D mepụta ngwa agha ndị na-erughị euro 15
Dị ka ọmụmụ ndị na-adịbeghị anya, site na iji faịlụ ziri ezi, ọ ga-ekwe omume imepụta ngwa agha 3D ebipụtara maka ego na-erughị euro 15.
Ndị otu a jisiri ike gbanwee ihe ọkụkụ CO2 n'ime plastik maka ibi akwụkwọ 3D
Na Harvard Medical School ha jisiri ike mepụta usoro iji gbanwee CO2 anwuru n'ime plastic maka mbipụta 3D.
Nke a bụ otu mbipụta 3D 'nyeere aka' Chris Froome merie Tour de France ọhụrụ
N'ụzọ dị mfe Chris Froome nwetara teknụzụ dị ka mbipụta 3D iji nyere ya aka imeri Tour de France
Sagunto gbalịsiri ike iji drones gbochie ndị na-asa ahụ na osimiri ya ka mmiri ghara iri ha
Ozu ndị na-azọpụta ndụ n’akụkụ osimiri Sagunto ga-eji drones nyere aka ileba ma gbochie ihe ọghọm mmiri na osimiri ha.
Nke a bụ mpụta igwe nke otu ụmụ akwụkwọ si Madrid mere
M ka na-echeta ụbọchị m dịka nwa akwụkwọ sekọndrị, ikekwe anyị ebughi ebum n'uche dị elu maka ọtụtụ ebumnuche, mana m na-echeta ya dị ka ...
Arkema na - eme ka ngwa ngwa ngwa ngwa si na ụlọ ọrụ China ọhụrụ ya
Arkema kpebisiri ike ịbụ otu n'ime ụlọ ọrụ na-eduga n'ime ngalaba mbipụta 3D yana, na nke ahụ ...
Stratasys na-emepụta akụkụ dị iche iche nke Airbus A350 XWB
Airbus ka kwuputara na Stratasys ga-ahụ maka imepụta akụkụ dị iche iche maka ụgbọ elu A350 XWB.
Ekele maka mbipụta 3D, enwere ike ịme oche oche ụgbọ elu dị mfe karị
N'ihi ọkachamara ọkachamara Andreas Bastian, enwere ike ịme oche oche ụgbọ elu dị mfe ugbu a maka iji mbipụta 3D.
Bean, 3D SLA na-ebi akwụkwọ nke meriri na Kickstarter
Banye ebe anyị ga-ekwu maka Bean, ụdị onye mbipụta 3D ụdị nke Kudo3D mebere nke kpochara mkpọsa ego ya na Kickstarter.
Qlone bụ ihe nyocha 3D na-atọ ụtọ maka obere ihe nke ụlọ ọrụ Technologies Eyecue Vision wepụtara kpamkpam.
Anyị na-akọwa etu ọrụ teknụzụ DMLS si arụ ọrụ, teknụzụ a na-enye ohere ịmegharị igwe site na laser.
Oké ọnụ ahịa bara nnukwu uru na 3D-ebi akwụkwọ. Ruby tapped n'ọnụ
3Dlọ ọrụ XNUMXDverkstan amalitela usoro akara Olsson Ruby. Emeputa kere mbụ rubi-tipped n'ọnụ.
General Electric Induction na Aidimme sonyeere ike ịrụ ọrụ na ibipụta 3D ọla kọpa
N'ihi mmekorita na-adịbeghị anya n'etiti General Electric Induction na Aidimme, ọ ga-ekwe omume ịmepụta ihe ntinye site na mbipụta 3D.
Intel kwụsịrị ire ngwaahịa Joule Galileo na Edison.
Mbadamba ndị a webatara na 2014 webatara atụmatụ ndị na-adọrọ mmasị, mana ezughi iji nagide Raspberry Pi na Arduino
Ikea na-ekwupụta ọkwa ọhụrụ nke ngwaahịa 3D edepụtara
Site na ngalaba ahia Ikea ka enwere ulo oru nta akuko maka ikwuputa na ...
Obi 3D a biri ebi enwewo ike iti maka ọkara elekere
Site na mahadum ETH nke Zurich anyị na-enweta ozi sitere na otu ndị nyocha ndị mepụtara obi 3D ebipụtara.
Katapila na-egosi anyị uru dị na rọbọt na-arụ ọrụ brik
Caterpillar na-ekwupụta itinye ego nke ihe ruru nde euro 10 na Fastbrick Robotics, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịtọlite ​​robot brik.
Leapfrog Bolt Pro, onye na-ebi akwụkwọ desktọọpụ ọkachamara
Bolt Pro bụ ihe ntanetị 3D ọhụrụ si Leapfrog, ihe nlele nke na-enye nsonaazụ ụlọ ọrụ mana enwere ike iji ya dị ka desktọọpụ desktọọpụ ...
Ndị na-ebi akwụkwọ iri anọ dị maka United States Navy
Dịka onye na-ekwuchitere ndị agha ụgbọ mmiri United States ekwupụtala n'ihu ọha, o doro anya na taa ha enweela ndị obibi akwụkwọ 40D 3D XNUMX na-arụ ọrụ.
Anyị na-enyocha ihe nyocha 3D nke XYZPrinting. A handheld nyocha na a mara mma nke ukwuu price, mfe iji na na anyị nwere ike ibufe n'ebe ọ bụla.
Ha na-achịkwa iji mee graphene ụfụfụ ekele maka mbipụta 3D
N'ihi usoro ọhụrụ a nke e bipụtara ugbu a, ugbu a ụmụ mmadụ ga-enwe ike imepụta ụfụ graphene n'ọtụtụ buru ibu.
Okpu maka clarinets site na mbipụta 3D
Site na oru ngo nke Mahadum nke Balearic Islands, anyị nwere ike ịmepụta gbọmgbọm maka clarinets site na mbipụta 3D.
Ekele maka nsị a, ị nwere ike ịme mkpịsị aka nke abụọ maka aka gị
Ọrụ a dị mma na-agba anyị ume imepụta ihe mgbagwoju anya ma na-arụ ọrụ maka aka anyị site na iji usoro obibi akwụkwọ 3D.
Xact Metal na-emepụta ígwè obibi akwụkwọ 3D nke ụlọ ọrụ niile ga-enweta
Xact Metal, mmalite ohuru America, na-eweta ígwè obibi akwụkwọ 3D izizi mbụ ya iji kụọ ahịa, XM200.
3D obibi na-enye ohere mmepe nke ọhụrụ ụdị graphene
Site na China ha na-egosi anyị usoro ọhụụ iji nwee ike imepụta ihe owuwu graphene dị mfe ma sie ike karị site na mbipụta 3D.
AONIQ ji anwa anwa were PVC 3D
AONIQ ka kwuputara ọbịbịa n'ahịa ahụ na August 1, 2017 nke onye nbipute ọhụrụ 3 888D, ihe nlere anya nke nwere ike iji plastik PVC rụọ ọrụ.
Ekele Futuralve, a na-atụ anya ya ịzụlite turbines site na mbipụta 3D
Futuralve bu oru ohuru nke Renishaw meputara nke na acho imeputa ihe ohuru maka ibiputa 3D nke a gha eji mee ihe.
Umlọ obibi 3D nke Tumaker ga-aputa n'ahịa maka ekeresimesi
Mgbe ogologo oge echere, Onye isi oche nke Tumaker mechara gwa anyị na Voladd ọhụrụ ga-akụ ahịa na Krismas.
Volumic Stream MK2, ọgbọ ọhụụ 3D na-ebi akwụkwọ na-abịa
Site na France anyị na-enweta ngwa pịa ebe a na-enye anyị ọhụụ Volumic Stream MK2 na atụmatụ ọrụ ya niile na-atọ ụtọ.
Mosaic Manufacturing na-egosi anyị ihe dị iche iche nke Palette +
Mosaic Manufacturing bụ ụlọ ọrụ na-emepụta Palette +, ihe ngwọta na-akpali akpali maka ịgwakọta agba dị iche na ngwa nbipute 3D gị.
APWorks na Dassault Systems Onye Mmekọ weta Ohere di Mma na Aerospace Industry
APWorks bụ otu n'ime ụlọ ọrụ na-arụsi ọrụ ike na ahịa, ọ bụghị n'efu ka anyị na-ekwu maka ụlọ ọrụ nke enyemaka ...
Nke a bụ ihe 3D ụgbọ ala ebipụtara nke KLIO Design mepụtara
The South Korean emeputa KLIO Design, pụrụ iche na imewe na imewe nke ụgbọala, na-egosi anyị ọhụrụ ya 3D e biri ebi ụgbọala.
N'isiokwu a, anyị ga-akọwa ihe ahụmịhe anyị nwere mgbe anyị na-achịkọta ngwa nbipute 3D na Kit BQ HEPHESTOS. Mbipụta webatara na njedebe nke afọ 2016
Ekele maka teknụzụ a ọ ga-ekwe omume ịmata ihe dị n'ime ime ụlọ mechiri emechi
Ekele maka teknụzụ ọhụrụ a mepụtara na California, naanị drones abụọ ị nwere ike ịmata ihe dị n'ime ime ụlọ.
Pgbọ ala na-emeri Pikes Peak 2017 jiri akụkụ dị iche iche nke 3D bipụtara
N'ihi ọrụ magburu onwe ya Poly-Shape n'ichepụta akụkụ titanium, ụgbọ ala Romain Dumais enweela ike imeri Pikes Peak.
Netherlands ji mpako na-egosiputa akwa igwe ọhụrụ 3D edere
Ndị Injinia si Mahadum Teknụzụ nke Eindhoven gosiri anyị akwa igwe kwụ otu ebe ha mere site na mbipụta 3D.
Edeela mbipụta 3D ka ọ dị ka ụzarị ọkụ nke XNUMXst narị afọ na ụlọ ọgwụ
Ijere ndị mmadụ ugwu dị egwu n'etiti ngalaba ahụike, mbipụta 3D ka ewerela dị ka ụzarị ọkụ X nke XNUMXst narị afọ.
GE mmako ATLAS, otu n'ime ndị na-ebi akwụkwọ 3D kachasị elu n'ụwa
GE Additive, nkewa nke General Electric, na-egosi anyị igwe obibi akwụkwọ ATLAS 3D ọhụrụ ya, ezigbo ihe atụ maka ụlọ ọrụ ụgbọelu.
Sperm nwere ike ịbụ ngwá ọrụ megide ọrịa kansa ekele maka mbipụta 3D
Otu ìgwè nke ndị nyocha si Mahadum Chemnitz enweela ihe ịga nke ọma n'ichepụta usoro iji mesoo ọrịa cancer akpa nwa na spam.
Catec na Alestis sonyeere ndị agha iji mejupụta teknụzụ obibi 3D ọhụụ
Alestis Aerospace na CATEC bịanyere aka na nkwekọrịta mmekorita iji jikọọ aka wee mepụta usoro obibi akwụkwọ 3D ọhụụ maka ihe mejupụtara.
China na-anwale nke mbụ ụgbọ elu anyanwụ dị elu
E nyere ụlọ ọrụ China Aerospace Science and Technology Corporation ọrụ ịzụlite ma wuo mmiri mbụ anyanwụ na-adịghị na China.
Michelin na-egosi anyị taya anaghị ebi emebi 3D biri ebi taya
Michelin na-egosi anyị taya ọhụrụ ya anaghị emebi emebi arụpụtara site n’iji usoro obibi akwụkwọ 3D na biomaterials eme ihe.
BlackBelt, onye nbipute 3D ebe ogologo iberibe ahụ agaghị abụ nsogbu
N'ihi usoro mmekorita nke Kickstarter, taa, m nwere ike iwebata gị BlackBelt, onye nbipute 3D nke nwere ike imepụta ihe nwere ogologo na-enweghị ngwụcha.
Boom Supersonic tụgharịrị na mbipụta 3D maka imepụta ụgbọ elu ultrasonic ya
Site na Boom Supersonic ha na-ekwuputa nkwekọrịta ha na Stratasys nwere iji rụkọta ọrụ na nhazi na nnwale nke ụgbọ elu elu igwe ọhụrụ ha.
'Onye obula' meriri ihe nrite maka ihe kacha mma n'ime asọmpi nke Olivetti haziri
Valencialọ akwụkwọ Valencia nke Ekike Kachasị Elu ejirila kwupụta onwe ya onye mmeri nke mbipụta nke abụọ nke Olivetti Design Contest 2017.
Anyị gara leta Onye kere Faire Barcelona 2017
Ihe omume nke na-eme ka ndị na-anụ ọkụ n'obi na-ezukọ, na-ekerịta ihe ọmụma ha niile na okike ha site na okwu, ogbako na ngosipụta.
Nke a bụ igwe obibi akwụkwọ ọhụrụ 3D na ụlọ mmụba 3D nke Grupo Sicnova kere
Grupo Sicnova ka mere ozi ọma mgbe ngosipụta ọrụ gọọmentị nke ihe nbipute ọhụrụ 3D maka iji ụlọ ọrụ mmepụta ihe yana ebe obibi 3D eji atụ ọhụụ.
Na Canada ha arụ ọrụ na igwe obibi akwụkwọ 3D nwere ike ịmegharị onwe ha
Otu ìgwè nke ndị nyocha si Canada amalitela ịmalite ọrụ na-achọ ịmepụta onye nbipute 3D na-ebipụta onwe ya.
Mpempe akwụkwọ Fuse 1, onye nbipute SLS mbụ nke ụlọ ọrụ ahụ
Formlabs Fuse 1 bụ onye nbipute SLS ọhụrụ nke ụlọ ọrụ North America chọrọ iji merie ngalaba a dị mgbagwoju anya nke ahịa ahụ.
HP na-aga n'ihu na-abawanye nzọ ya na ngalaba mbipụta 3D
HP na-eweta azịza azụmahịa ya ọhụụ dabere na teknụzụ Jet Fusion na-eji ohere RAPID + TCT eme ihe.
Ndị European Defense Agency na-arụ ọrụ ugbu a na mbipụta 3D
European Defense Agency na-arụ ọrụ ugbu a na ebumnuche iji chepụta ụzọ iji weta mbipụta 3D n'ọgbọ agha.
New filaments maka 3D-ebi akwụkwọ kere si ugbo n'efu
Oge a ka anyị ga-ekwu maka mmemme ọhụrụ nke taa ọtụtụ ...
Anyị nyochara Wanhao Duplicator 3 7D ngwa nbipute na na-eji photosensitive resin synthesize anyị aghụghọ na ahụkebe mkpebi
SuperGiz, ihe ị ga - eme n'ụlọ gị
SuperGiz, ihe oru mmeghe, ị ga - enwe ike imepụta ma mụta imepụta ma mezie mgbanwe ogwe aka gị site n'ụlọ gị.
Nke a bụ ihe lemon achicha nke 3D ibipụtara kere
N'oge emume nke FabLab na Toulusse, e gosipụtara usoro dị egwu iji mee achicha site na mbipụta 3D.
Ichefu ihuenyo mmetụ aka na mkpịsị aka aka Arduino a
B. Aswinth Raj bụ onye ọrụ nke jisiri ike mepụta mkpịsị aka aka, gloves nke na-enye anyị ohere ijikwa kọmpụta site na mmegharị ...
Ndị a bụ ndị na-ebi akwụkwọ ọhụụ ọhụrụ nke M3D kere
M3D laghachiri na eze ịme ka anyị mata ụdị abụọ ọhụụ, ụdị nke Micro ya ka mma yana ụdị nke kachasị elu.
Sinterit na-ekwupụta mwepụta nke sieve maka ngwaahịa ya
Sinterit bụ ụlọ ọrụ Polish metụtara ụwa nke mbipụta 3D a maara nke ọma na Europe na taa na-egosi sieve ọhụrụ ya.
United States ga-eji mbipụta 3D kee bọmbụ
United States ka kwuputara na Ngalaba Nchedo ya ga-eji mbipụta 3D na imepụta bọmbụ dịka MOAB.
Site na Russia, kpọmkwem site n'obodo Tomsk, anyị na-enweta onyogho nke nnukwu igwe eji ebi akwụkwọ 3D nwere ike imepụta akụkụ ihe ruru otu tọn.
Fidget Spinner bụ usoro kachasị ọhụrụ n'etiti ndị na-eto eto na ndị okenye. Anyị na-agwa gị otu ị ga - esi nweta otu n'ime aka ndị a na - agbagharị n'elu ekele maka Ngwaike na - enweghị ...
ELIX Polymers na-arụ ọrụ na mmepe nke akara ule ọhụụ maka mbipụta 3D XNUMXD
Spanishlọ ọrụ Spanish ELIX Polymers ka kwupụtara ebumnuche ya itinye ego na mmepe akara ugo ọhụụ maka plastik ABS.
EnvisionTEC na-atọ anyị ụtọ na enweghị obere ihe ọhụrụ 7 maka ndị na-ebi akwụkwọ 3D
Ndị na-ahụ maka EnvisionTEC ewepụtala ihe asaa na-erughị asaa maka iji naanị ha ebi akwụkwọ 3D na-atọ ụtọ.
Nke a bụ ihe izizi ụgbọ mmiri nke 3D wuru
RAMLAB bụ ụlọ ọrụ izizi na Europe dum nwere ike ịmepụta teknụzụ ụgbọ mmiri na-arụ ọrụ site na iji teknụzụ obibi akwụkwọ 3D.
Nye gị 3D ngwa nbipute a ihuenyo mmetụ ekele AstroBox Touch
AstroBox Touch bụ ihuenyo mmetụ aka nke ị nwere ike jikọọ na ihe niile 3D na-ebi akwụkwọ na ahịa yana nke ahụ nwere ike ịbụ nke gị maka $ 100.
Ekele maka ihe obibi akwụkwọ 3D ọhụrụ a, enwere ike ịmepụta ihe ndị na-emepụta ọgwụ silicone na awa
Nnyocha nke Mahadum Florida mere ka o kwe omume ịmepụta usoro ọhụrụ iji 3D bipụta silicone maka ọgwụgwọ.
Mpempe akwụkwọ ọla edo 79 nke 3D ebipụtara n’ụwa ugbua
Thales Alenia Space na-atụle ọnụọgụ nke mpempe akwụkwọ 3D ebipụtara na taa ha abanyela na mbara igwe na satịlaịtị ha.
NASA nke obere satịlaịtị dị gram 64 ma bie ya
Otu nwoke dị afọ iri na asatọ nke India mepụtara obere satịlaịtị maka NASA nke dị naanị gram 18 ma ọ bụ onye nrụpụta 64D ejiri carbon ...
Clay XYZ na-egosi anyị ụrọ ihe eji ebi 3D
Nweta Clay XYZ seramiiki 3D na-atọ ụtọ na ọnụego mmeghe nke naanị $ 699 site na Kickstarter.
Mahadum Northwest na-amalite akwa ovaries na-arụ ọrụ site na mbipụta 3D
Otu ìgwè ndị na-eme nchọpụta na ndị ọkà mmụta sayensị si Mahadum Northwest enweela ihe ịga nke ọma n'ịmepụta akpa 3D ebupụtara ọgwụ okike.
ESA meriri brik site na iji 3D ebiputa na moondust
Ndị ọkà mmụta sayensị na ndị nyocha si ESA jikwaa iji mepụta teknụzụ ọhụụ na brik ebipụta 3D na Ọnwa.
Volkswagen ga-atụgharị na mbipụta 3D iji rụpụta akụkụ maka klas ya
Obi abụọ adịghị ya na e nwere ahịa na-arịwanye elu nke na-arịwanye elu nke ọtụtụ ndị nwere ike ịhụ, anyị na-ekwu ...
Phlọ ọrụ Aleph Objects ebidola ABment filament mbụ n'efu. Ihe nkedo nke anyi nwere ike imeputa onwe anyi site na ntuziaka na akwukwo ...
FFForld filament nyochaa: Mgbanwe, PETG, ABS, Metal na PLA. Anyị ga-etinye ahụmihe anyị n’ule iji nweta nsonaazụ kacha mma
Obi Juan, onye Spain aha ya bụ Juan González, enwetala nturu ugo nke O'Really Open Source. N'ịbụ onye mbụ a họpụtara na Spanish na onye mmeri nke onyinye ahụ ...
A na-eziga onye na-ebipụta Legio site na onye ọrụ Spain bụ Leon 3D na ngwa mgbakọ. Ezubere ma rụpụta ya na Spen. Nwere ike iji ọtụtụ ụdị ihe
Anụ & Anụmanụ na-egosi anyị anụ ya na ngwa nbipute 3D
Anụ & anụ ụlọ bụ mmalite nke Australia nke mere ka ọ ju anyị anya na ngosipụta nke ihe eji eji anụ anụ 3D ọhụrụ.
Generalitat nke Catalonia ga-etinye nde euro 28 na mbipụta 3D
Generalitat nke Catalonia ka kwupụtara itinye ego nke nde euro 28 maka okike Global 3D Printing Hub na Barcelona.
Continental nwere mmasị na ígwè obibi akwụkwọ 3D
Continental ka kwuputara nkwekọrịta ya na Concept Laser ịwụnye ígwè obibi akwụkwọ 3D ọla ọcha abụọ.
Iko ndị ahaziri onwe ha nke 3D bipụtara bịarutere El Corte Inglés
El Corte Inglés na-ekwuwapụta na, site na enyemaka ya Optica 2000, ọ ga-ebido ire Mimic Eyewear 3D e biri ebi iko n'ọtụtụ ebe ya.
General Electric kwupụtara ntinye ego euro 100 nde na mbipụta 3D
General Electric ga-etinye ego ọzọ 100 nde euro iji zụlite ma welie teknụzụ dị n'azụ mbipụta 3D.
Siemens na-eweta mbipụta 3D gaa n'ichepụta ụgbọ okporo ígwè
Siemens bụ otu n'ime ụlọ ọrụ na-enye onyinye kachasị iji weta mbipụta 3D na ụdị ...
MIT gosiri anyị ya ugboelu engine e biri ebi kpamkpam na plastic
Otu n'ime ndị otu MIT raara nye mmepe nke injinị na-arụ ọrụ arụpụtara igwe jetụ izizi arụpụtara arụnyere na rọba.
PostProcess Teknụzụ na-enweta ntinye ego nke nde dollar 4 iji gaa n'ihu na mmepe nke teknụzụ ya.
PostProcess Teknụzụ ka natara itinye ego nke nde dolla 4 iji gaa n'ihu na mmepe nke teknụzụ ya na-atọ ụtọ.
Wiivv na-anata nde $ 1,1 iji mepụta akpụkpọ ụkwụ omenala site na mbipụta 3D
Wiivv bụ mmalite nke Canada nke emere ntọala maka naanị ebumnuche nke ịzụlite akpụkpọ ụkwụ omenala ...
Ngwaọrụ Desktọpụ ga-eme ka anyị bipụta akụkụ igwe n'ụlọ
Desktop Metal chọrọ iji mee ka ọnụ 3D obibi akwụkwọ nke akụkụ a n'ezie iji metal dị ka a na-ewu ihe site na iji ojiji nke oké ọnụ na-ebi akwụkwọ
Egwuregwu Renault chọrọ iweta mbipụta 3D na Formula 1
N'iji ememe nke Shanghai Auto Show mee ihe, Renault Sport na-egosi anyị ihe ngosi ọhụụ RS 2027 Formula 1.
NASA weputara akwa ohuru "Smart" nke eji ihe eji eme 3D
NASA ka gosiputara echiche ohuru banyere akwa oghere nwere ọgụgụ isi emeputara maka oru ndi n’iile ga-aru.
Rybanye ebe anyị ga-ekwu maka ọrụ dị egwu ebe ị ga-esi wuo igwe arcade nke gị site na mbipụta 3D.
A na-ere Asus Tinker Board ugbu a
A na-erere Asus Tinker Board ọhụrụ, bọọdụ nke nwere ike okpukpu abụọ nke Raspberry Pi 3 Model B ma dị maka ihe dị ka euro 60.
Asepeyo weputara usoro ihe omume banyere ogwu nke 3D metụtara
Ahụike nlekọta ahụike Asepeyo ka malitere usoro nyocha ọhụụ n'ụlọ ọgwụ Spanish abụọ iji wee bido mbipụta 3D.
PassivDom nwere ike n'ichepụta ụlọ e biri ebi naanị n'ime awa asatọ
PassivDom bụ ụlọ ọrụ ọhụrụ dabere na Ukraine nke ka mere akụkọ na ọkwa European ka a gosipụta n'oge ...
Mahadum Swansea na-egosi anyị egwu dị egwu ha nwere
N'ihi ngwakọta nke teknụzụ dịka mbipụta 3D, ndị na-eme nchọpụta si Mahadum Swansea jisiri ike mepụta njiri mara mma.
3Dfils na-ebupụta filaments ọhụrụ atọ maka mbipụta 3D
Banye ebe anyị ga-ekwu maka filaments atọ ọhụụ nke ụlọ ọrụ 3Dfils nke Spain malitere na ahịa.
Boeing kwuru na ha ga-echekwa ihe ruru nde dọla atọ n'ụgbọelu ọbụla emepụtara site na ibipụta 3D
Dabere na nyocha na atụmatụ Boeing mere, ekele maka mbipụta 3D nke akụkụ titanium ha ga-enwe ike belata ọnụahịa mmepụta ha nke ukwuu.
Otu Sicnova na iGo3D sonyere n'ike iji mepụta ụlọ nrụpụta 3D
Otu Sicnova na-ekwuputa nkwekọrịta mmekorita ya na ndị German nke iGo3D iji jiri aghụghọ jiri echiche nke ụlọ ọrụ mbipụta akwụkwọ 3D.
HP na-arụ ọrụ ugbu a na ọgbọ ọhụrụ nke ndị na-ebi akwụkwọ 3D
Ndị isi ụlọ ọrụ HP kwadoro ebumnuche ha iji gaa n'ihu itinye ego na mmepe na ịmepụta ngwaahịa ọhụrụ maka ibipụta 3D.
CSIC ga - amalite iji bioprinter 3D kachasị elu taa
Ndị CSIC, Spanish Higher Council for Scientific Research, ka kwuputara na ha jisiri ike nweta nkwekọrịta na ...
Italian Volt na-ewetara ya ọgba tum tum 3D e biri ebi egwuregwu ọgba tum tum
Banye ebe anyị ga-ekwu maka ọgba tum tum igwe eletriki ọhụrụ nke 3D bipụtara site na ụlọ ọrụ Milanese Italian Volt.
Onyonyo 4, ihe eji eme 3D nke ohuru nke emere 3D XNUMXD
Rybanye ebe anyị ga-ekwu maka otu 3D sistemụ siri mepụta sistemụ modulu na nke ọhụụ maka mbipụta 3D nke ha kpọrọ ọgụgụ 4.
Milshake3D, onye nbipute 3D nke àgwà ya ga-eju gị anya
Milshake3D bụ ọrụ Kickstarter nke na-achọ imepụta igwe nrụpụta 3D nke emebere maka ndị na-ese ihe na ndị nka.
Bipute igwe nke aka gi ma gwuo egwuregwu nke Raspberry Pi
Ekele Christopher Tan anyị nwere ike iru igwe nke aka anyị, igwe na-eweghachi igwe ochie arcade ma ọ bụ ogwe ...
Snapmaker, ihe nbipute 3D nke nwere ike ịbụ nke gị na erughị euro 300
Snapmaker bụ ọrụ na-adọrọ mmasị na-achọ ego na Kickstarter ebe a na-enye onye nbipute, onye na-ese ihe na igwe igwe ihe n'otu ụdị.
Mara Lucas Krauel ntakịrị, onye dọkịta na-awa ahụ nke 3D-bipụtara etuto iji lụ ọgụ kansa nwata
Banye ebe anyị ga-ekwu maka Lucas Krauel, onye dọkịta na-awa ahụ nke Catalan nke na-eji mbipụta 3D dị ka ngwa ọgụ iji merie neuroblastoma.
Robotics hụrụ n'anya? Agba nke abụọ nke BQ Campus dị ebe a
BQ na-ekwuwapụta emume nke mbipụta nke abụọ nke ogige ezumike ya maka ụmụaka n'etiti 8 na 14 afọ, ihe omume ebe ha ga-akwalite ihe ọmụma ha.
Pylos, usoro ohuru nke choro iweta mbiputa 3D na mpaghara ihe owuwu
Pylos bụ teknụzụ ọhụụ nke Institute of Advanced Architecture nke Catalonia mepụtara nke na-achọ imepụta ihe owuwu yana ihe okike.
HP Jet Fusion 3D 4200 ga-abata na Spain na Mee
Mgbe ogologo oge echere, n'ikpeazụ HP Jet Fusion 3D 4200 ga-amalite iru ndị ahịa Spanish niile zụrụ otu.
3D ebi akwụkwọ nwere ike ịbụ na booster na graphene mkpa
Otu ìgwè ndị nyocha si Mahadum Delf nke Delf na-amụ otu esi emepụta ihe ahaziri iche site na iji mbipụta 3D.
Ihe 3 anyị nwere ike ibipụta maka Nintendo Switch anyị
Anyị na-agwa gị ihe atọ anyị nwere ike ibipụta ya na ngwa nbipute 3D anyị nke ga - abụ ngwa maka Nintendo Switch ọhụrụ ...
Exo Smart 3DFab, ihe nbipute 3D nke ị ga-achọ
Ntinye ebe anyị ga-ekwu maka atụmatụ ndị na-adọrọ mmasị nke onye nbipute 3D dị ka Exo Smart 3DFab ọhụrụ nwere.
ATOM 2.5EX delta type 3D na ngwa nbipute na-agbanwerịta isi
ATOM 3EX 2.5D Printer na-ejikọ nkenke, nkwụsi ike na imepụta ihe mara mma yana isi nwere ike iji onye nbipute dị ka ihe osise laser ma ọ bụ CNC.
Naanị ụdị Delange Type-S n'ime ụwa weghachiri eweghachi site na mbipụta 3D
Naanị Delange -dị-S n'ụwa, ụgbọ agha na-esote agha, enweela ike iweghachi iji nọgide na-arụ ọrụ karịa 100 afọ mgbe e mesịrị.
Disney na-etinye ego na MakieLab, onye na-emepụta ụmụ bebi 3D ebipụtara
Na-enweghị ọkwa ọkwa ọkwa anyị enweela ike ịmara na Disney mechara nweta nnukwu akụkụ nke MakieLab na ụmụ bebi ndị e biri ebi.
Perpetuum, kalenda maka ndụ nke obibi 3D mere
Spanishlọ ọrụ Spen na-emepụta Yonoh bụ onye mepụtara echiche dị na Perpetuum, kalenda nke dị irè maka ụbọchị ọ bụla n'afọ ọ bụla.
Soon ga-enwe ike ịga njem nleta Fab Lab na Lyon na ndị njem ọhụụ
Obodo Lyon kpebiri iji uru nke ụlọ pụrụ iche dịka Casa del Chamarier iji mepụta ụlọ nyocha ọhụụ ọhụrụ Fab.
MIT na-egosi anyị echiche ya nke akpụkpọ anụ e biri ebi maka robot
Site na MIT ha juru anyị anya site na ngosipụta nke echiche ọhụrụ nke akpụkpọ anụ e biri ebi dị mma maka ụdị robot ọ bụla na-esote.
Triditive na-enye onye mbipụta ATOM 3EX 2.5D ọhụrụ ya
N'iji emume CeBIT mee ihe na Hannover, ụlọ ọrụ Australia Triditive gosipụtarala ATOM 2.5EX ọhụrụ n'ihu ọha.
Edition Ceramic na-eju anyị anya na nchịkọta ọla site na mbipụta 3D
Efere Ceramic bụ mmalite French nke emere na 2016 nke gosipụtarala nchịkọta mbụ nke ọla edo ejiri seramiiki rụọ site na mbipụta 3D.
Onye na-eto eto Bolivian na-emepụta oghere nke aka ya site na mbipụta 3D
Nwatakịrị nwoke dị afọ 15 amụrụ na Bolivia enweela ike mepụta nrụrụ aka ya, aka ejiri plastik mee site na mbipụta 3D.
HP mepee ụlọ nyocha ewepụtara naanị maka ibi akwụkwọ 3D
HP na-ekwuwapụta mmeghe nke ụlọ ọrụ ọhụrụ 350-square-mita na Oregon maka 3D mbipụta akwụkwọ nyocha na mmepe.
3D obibi ruru Fallas nke Valencia
N'ihi ọrụ ndị Polytechnic University of Valencia rụrụ n'afọ a, Fallas nke obodo ahụ ga-enwe ihe osise ndị mbipụta 3D mere.
Ihe nbipu 3D a nwere ike n'ichepụta omenala chịngọm
Wacker laghachiri na akụkọ ahụ na iwebata teknụzụ ọhụụ ọhụụ yana ngwa nbipute 3D a na-ata ata kpamkpam.
Nyochaa nke BQ WITBOX 3 2D na ngwa nbipute, na Cartesian anyụike na-ebipụta iji FDM. Ihe mbipụta 3D a ọ bara uru?
Siemens bụ ụlọ ọrụ izizi mepụtara akụkụ site na mbipụta 3D maka ụlọ ọrụ ike nuklia
Siemens, site na teknụzụ ya dị elu, abụrụla ụlọ ọrụ izizi rụpụtara akụkụ site na mbipụta 3D maka ụlọ ọrụ nuklia.